ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် တရုတ်-အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားမည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် တရုတ်-အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားမည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီး(ကျွမ့်လူမျိုး)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော် နန်နင်း၌ ကျင်းပသည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲရှိ ထိုင်းနိုင်ငံပြခန်းတွင် ပါဝင်ပြသနေသူများကို စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာက အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရာတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီး(ကျွမ့်လူမျိုး)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော် နန်နင်း၌ ကျင်းပသည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲရှိ ထိုင်းနိုင်ငံပြခန်းအား လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသူများအား စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ခု၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်က လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ဤစင်္ကြံသည် ဒေသတွင်း ကာလရှည်ထိခိုင်မှုမရှိသောငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် အကျိုးစီးပွားမျှဝေမှု မြှင့်တင်ရန်အတွက် အဓိက ထောက်တိုင် တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်က အာဆီယံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အမြင့်ဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့ရန် ၎င်းတို့သည် လက်ချင်းချိတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်း ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ယင်းအရေးပါသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည် အနာဂတ်ကာလတွင် နီးကပ်သော မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် အခြေခံကျကြောင်းလည်း မီးမောင်းထိုးပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်၏ “ လူသားမျိုးနွယ်ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်း တစ်ခုတည်ဆောက်ရေး”ရည်မှန်းချက်အပေါ်တွင်လည်း ပရာယွတ်က ချီးကျူးခဲ့ပြီး ၎င်းရည်မှန်းချက်သည် လူသားတို့ ကောင်းစွာ ရှင်သန်နေထိုင်သည့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း နှင့် ဘုံစိန်ခေါ်မှုများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေကြောင်း နှင့် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပြန်လည်နလံထူသော လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခု မြှင့်တင်ရန် အာဆီယံ၏ ရည်မှန်းချက် နှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ကိုက်ညီကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေး နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှုမှ လေ့လာသင်ယူကြရန်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား ၎င်းက အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီး အာဆီယံ နှင့် ဒေသခွဲများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ၎င်းက ထောက်ခံအားပေးကြောင့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China-ASEAN cooperation to be enhanced in all dimensions: Thai PM
BANGKOK, Nov. 23 (Xinhua) — Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha said Monday that the establishment of the comprehensive strategic partnership between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and China will enhance cooperation in all dimensions.
Speaking ataspecial summit commemorating the 30th anniversary of ASEAN-China dialogue relations via video link, Prayut said that in the past decades, this platform has beenamajor pillar for promotion of durable peace and shared prosperity in the region.
Last year, ASEAN and China became each other’s top trading partner and they jointly battled the COVID-19 pandemic and global economic downturn. Prayut highlighted these significant developments as fundamental for forging closer partnership in the future.
Prayut also praised the Chinese leader’s vision of “buildingacommunity withashared future for mankind,” saying that the vision demonstrates China’s commitment to addressing the common challenges and creatingaliveable world, and is in line with ASEAN’s vision to promotearesilient community and win-win cooperation.
He suggested that ASEAN countries can learn from China’s achievement on poverty alleviation and sustainable agriculture, and expressed his support to China’s constructive role in narrowing development gaps both in ASEAN and the sub-regions.
1- Photo taken on Sept. 11, 2021 shows exhibitors from Thailand at the 18th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Xu Jiayi)
2- People visit the exhibition area of Thailand at the 18th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်လည်း သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်လျက်ရှိ